XOG CUSUB + AKHRI: Maxaa ka soo baxay Shirkii Hobyo ee u socday beelaha Habargidir? +(Go’aano culus oo ka soo baxay)! | HalQaran.com
Home Wararka Maanta XOG CUSUB + AKHRI: Maxaa ka soo baxay Shirkii Hobyo ee u...
Hobyo (Halqaran.com) – Shirkii Nabadda ee Magaalada Hobto oo ay ka qeyb galeen Beelaha kala duwan ee Habargidir ayaa khamiistii shalay si rasmi ah loo soo gabagabeeyey, waxaana laga soo saaray dhawr qodob.
Qodobka koowaad ayaa lagu caddeeyey in Golaha Hogaaminta Beesha Habargidir (GHHG) uu yahay gole ay ku midaysan yihiin Beelaha Habargidir, uuna matalaya fagaarayaasha guud, waxaana si wadajir ah magaca iyo mas’uuliyadda dhanka dhaqanka, siyaasadda, horumarinta bulshada ku hadli kara GHHG ee lagu doortay shirweynaha Habargidir.
War murtiyeedka ayaa sidoo kale lagu sheegay in Shirka Nabadda Hobyo uu soo dhoweeyey gogosha Dib-u-heshiisinta ee ka furmaysa caasimadda Galmudug ee Dhuusamareeb, ayadoo loogu baaqay dhammaan dhinacyada abaabulkeeda ku lugta leh in farsamada shirkaas wax laga bedelo loona qabto beelaha Galmudug nabadayn dhab ah oo la mid ah tan Hobyo.
Waxaa kaloo war murtiyeedka lagu soo dhaweeyey dadaalka dawladda Federaalka Soomaaliya iyo Dawladda aan QATAR ee ku deeqday dhismaha dekadda Hobyo. waxaana Dowladda Soomaaliya loogu baaqay in loo soo bandhigo shacabka Soomaaliyeed, gaar ahaan kuwa Galmudug nuxurka heshiiska dhismaha dekadda Hobyo si xog-ogoal loogu noqdo wax kasta oo ku xeeran heshiiskaas sida waqtiga la bilaabayo dhismaha iyo haddii ay jiraan shuruudo ka horeeya bilowga dhismaha.
Haddaba hoose ka akhriso qodobada laga soo saaray shirka oo dhammeystiran
Dib u heshiisiinta Beelaha Galmudug iyo Dhismaha Dawlad Goboleedka
Shirka Nabadda Hobyo wuxuu soo dhoweeyey gogosha Dib-u-heshiisinta ee ka furmaysa caasimadda Galmudug ee Dhuusamareeb, ayadoo loogu baaqayo dhammaan dhinacyada abaabulkeeda ku lugta leh in farsamada shirkaas wax laga bedelo loona qabto beelaha Galmudug nabadayn dhab ah oo la mid ah tan Hobyo.
Shirku wuxuu adkeynayaa in Hanaanka dhismaha Dawlad goboleedka Galmudug uu noqdo mid daahfuran, ay ku wada qanacsan yihiin beelaha Galmudug talana ku leeyihiin, loona madax-baneeyo beelaha kala duwan in ay soo xushaan ciddii u matali lahayd goleyaasha dastuuriga ah iyo guddiyada la dhisayo.
Shirku wuxuu ku baaqayaa in dhammaan deegaannada ay Beesha Habargidir degto iyo kuwa ay wax ka degto loo sameeyo Golayaasha Deegaanka, lagana billaabo Degmada Hobyo ee hadda Shirka Nabadda lagu qabtay.
Nabadaynta Beelaha Soomaaliyeed
Shirka Nabadda Hobyo wuxuu soo dhowaynayaa dadaalka dawladda Federaalka Soomaaliya iyo Dawladda aan walaalaha nahay ee Qatar ee ku deeqday dhismaha dekadda Hobyo. Hase yeeshee shirweynuhu wuxuu weydiisanayaa dawladda Federaalka Soomaaliya in loo soo bandhigo shacabka Soomaaliyeed, gaar ahaan kawa Galmudug nuxurka heshiiska dhismaha dekadda Hobyo si xog-ogoal loogu noqdo wax kasta oo ku xeeran heshiiskaas sida waqtiga la bilaabayo dhismaha iyo haddii ay jiraan shuruudo ka horeeya bilowga dhismaha.Shirweynuhu wuxuu Isla gartay dhismaha Gudi Isku-tashi oo xubnihiisu ka kooban yihiin dhammaan beelaha Galmudug, wuxuuna guddigu si gaar ah uga shaqayn doonaa mashruuca dhismaha dekedda Hobyo, iyadoo lagala shaqaynayo dawladda federaalka ah sidii loo bilaabi lahaa dhismaha dekedda Isla markaana shacabweynaha Galmudug ay uga wada qeybqaadan lahaayeen hirgalinta mashruuca dekedda Hobyo.